DeX Station ity, ilay gadget izay mamadika ny Galaxy S8 ho lasa solosaina | Androidsis
Rehefa ela niandrasana dia lasa izy ireo nanolotra ny sainam-pirenena vaovao an'ny Samsung. ny Galaxy S8 sy S8 + Tonga feno vaovao izy ireo ary ny iray amin'izany dia DeX Station, fitaovana vaovao natolotra ary hamadika ny smartphone ho solosaina birao.
Amin'izany fomba izany, Amin'ny Dex Station dia azontsika atao ny mampiasa ny Galaxy S8 sy S8 + amin'ny fampifandraisana azy amin'ny efijery ary mamela ireo fitaovana ireo hampiasaina toa ny hoe solosaina izy ireo.
2 Dex Station, fandidiana
Dex Station dia manana endrika boribory sy faritra hametrahanay ny telefaona. Rehefa manokatra ilay fitaovana isika dia hitantsika fa misy mpampitohy USB Type-C mampifandray ny smartphone.
Any aoriana no misy ny ekipa mpamolavola nampifandray mpampitohy famandrihana, a Output HDMI afaka mamerina atiny amin'ny kalitao 4K, USB 2.0 roa ary seranana Ethernet 100 Mb.
Samsung dia nieritreritra izay rehetra ilain'ny seranan-tsambo USB Fanohanana OTG mba hahafahantsika mampifandray izay fitaovana rehetra, toy ny totozy, fitendry ary mpanonta, amin'ilay fitaovana, mampitombo be ny fiasan'ny DeX Station.
Mariho fa ny Dex Station dia manana rafitra fampangatsiahana amin'izay ny telefaona tsy mafana loatra mandritra ny fampiasana.
Dex Station, fandidiana
Rehefa mampifandray ny DeX amin'ny monitor Ho hitantsika ny zotram-pifandraisana ampifanarahana amin'ny efijery aseho azy. Amin'izany fomba izany, ny tontolon'ny birao anao dia hampiseho varavarankely maromaro ahafahantsika manova ny habeny ary mifindra amin'ny zavatra tiantsika, ankoatry ny fahafahantsika mampiasa ny safidy efijery fisarahana hiasa amina rindrambaiko maro miaraka.
Tena nahomby ny fampiharana ary tena mahafa-po ny valiny, afaka miasa milamina amin'ny telefaona nefa tsy mampiasa solosaina mahazatra.
Ny antsipiriany iray hafa tena mahaliana dia raha manapaka ny Galaxy S8 isika ary tsy manidy ny fampiharana rehetra, rehefa mampifandray indray ny terminal isika dia hahita ilay interface satria nandao azy io tamin'ny fotoana farany isika.
Gadget tena mahaliana izay manokatra isan-karazany azo atao amin'ny Galaxy S8. Ny vidiny? Ny vidin'ny Samsung DeX Station dia mitentina 149 euro rehefa mahatratra ny tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung DeX Station, izao no fiasan'ny rafitra birao an'ny Galaxy S8 sy S8 +
Samsung Gear 360, miaraka amin'ny vahaolana 4K sy horonantsary mivantana 360